कम्पनीहरु को असबाबवाला फर्नीचर उत्पादन हजारौं को क्षेत्र मा आज काम गर्दै छन्, र प्रत्येक आफ्नो उत्पादन गरेको विश्वास सबै भन्दा राम्रो (वा उपभोक्ता विश्वस्त गर्न प्रयास)। गलत छनौट कसरी होइन? को surest तरिका - प्रतिक्रियाको विश्लेषण गर्न। हाम्रो वर्तमान अध्ययन को वस्तु - "को सोफा को सूत्र"।
कारखाना "सूत्र सोफा"
जग वर्ष - 1989. यो Kirovo-Chepetsk मा स्थित छ। नाम implies रूपमा कारखाना असबाबवाला फर्नीचर को उत्पादन मा माहिर। के, उत्पादकहरु अनुसार, "सूत्र" सही सोफा सिर्जना छ? यहाँ सफलता लागि सामाग्री हो:
आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग;
जर्मनी र इटाली ले फर्नीचर को सबै भन्दा राम्रो व्यवसायीक आकर्षित;
कम मूल्यहरु मा बेच्न उच्च गुणवत्ता उत्पादन सक्षम ठूलो मात्रा उत्पादन,;
काँचो माल को गुणस्तर नियन्त्रण।
सकारात्मक प्रतिक्रिया: "को सोफा को सूत्र" निराश छैन
, कारखाना उत्पादन मा उपभोक्ता आकर्षित पहिलो कुरा - अन्य निर्माताहरु, फर्नीचर को मूल्य भन्दा कम। कि "सूत्र सोफा" मा एक मोडेल सस्ता (तर धेरै छैन) यो प्रतियोगिहरु छ भन्दा हुनेछ छ। अर्को फाइदा - उच्च गुणस्तरीय असबाब। मूलतः प्राकृतिक छाला र राम्रो कपडा। अर्को आकर्षक बिन्दु - एक सफल फर्नीचर डिजाइन र सुविधाजनक सोफे को परिवर्तन को तंत्र बेड मा। र रूस मा उत्पादन कम साधारण "सूत्र सोफा" फर्नीचर। उदाहरणका लागि, कुर्सियाँ, recliners। तिनीहरूले के के हुन्? यो ठूलो आरामदायी कुर्सियों तंत्र को माध्यम द्वारा कायापलट छन्: तपाईं armrest नजिकै लीवर धक्का भने, अगाडि प्यानल rises र नरम, आरामदायक मा उत्तेजित गर्दछ footrest। अब, यो कुर्सी मा, तपाईं लगभग झूठ सक्नुहुन्छ तल, खुट्टा outstretched। साथै, Recliner यसको अक्ष र swings वरिपरि rotates। खरीददारों, र असबाबवाला फर्नीचर को एक ठूलो विकल्प जस्तै।
यो कागज मा चिल्लो थियो ...
तर तिनीहरूले ravines बारेमा भूल! सामान्य रूपमा मात्र छैन सकारात्मक प्रतिक्रिया "सूत्र सोफा" योग्य हुनुहुन्छ। मुख्य (र सबै भन्दा ठूलो) माइनस - गुणस्तर उत्पादनहरु। उपभोक्ताहरु एक वा दुई महिना पछि पनि सक्रिय प्रयोग छैन भनेर भन्न पनि सोफा परिवर्तन संयन्त्र को असफल। को असबाब सामाग्री गुणस्तर बारे उजुरी धेरै: छाला को शीर्ष तह असबाब मा दाग, मानिसहरूलाई मा घामले डढाउने काम को दुरुपयोग को परिणाम समान छोडेर exfoliates गर्दा अवसरमा थिए। विवाह निर्माता - सोही, कम्पनी यो छ भनेर स्वीकार्नुभयो। त्यहाँ सिलाई असबाब मा लगे कारीगरों को काम उजुरी छन्। यहाँ र त्यहाँ असमान रेखाहरू मार्फत, अक्सर सीवन भत्ता धेरै, सानो जो तिनीहरूले छोडेर छन् भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ छन्। एकदम अक्सर खडा छैन लोड वसन्त ब्लक - वसन्त बाहिर गिरावट। चाल वसन्त संलग्न भंगुर प्लास्टिक बनेको छ, छ। तर आफ्नो उत्पादनहरु को लागि "सूत्र सोफा" मूल्य छैन बजेट सेट! खरीदारों भुक्तानी भएको 1,00,000 rubles (एक सोफा औसत लागत),, तिनीहरू उच्च गुणवत्ता फर्नीचर, वर्ष आउन लागि प्रयोग गरिने प्राप्त हुनेछ भन्ने तथ्यलाई भर गर्ने अधिकार छ।
हामी निष्कर्ष आकर्षित
हामी देख्न सक्छौं रूपमा, उपभोक्ताहरूको प्राप्त कारखाना उत्पादन unambiguous प्रतिक्रिया टाढा छ। "ओछ्यानमा को सूत्र" छैन पहिलो वर्ष छ असबाबवाला फर्नीचर उत्पादन, र त्यो समयमा सबैलाई थियो। विकल्प तपाईंको हो।
Highchair Campione उच्च कुर्सी - बच्चा गरेको सान्त्वना र सुरक्षा
Inflatable ओछ्यानमा। समीक्षा मालिक
कुर्सी-झोला: भित्री वस्तुहरू समीक्षा
कुर्सी-नासपाती - घरमा सान्त्वना लागि स्टाइलिश सहायक
कार बच्चा Isofix अटाउँछन्
गृह ताप प्रणालीमा हावा खल्ती: हटाउनु कसरी?
जनसंख्या र क्रिमीआ क्षेत्र: तथ्य र तथ्याङ्कले। क्रिमीआ को प्रायद्वीप को क्षेत्र के हो?
वैज्ञानिकहरू पुरुष र महिला लागि अघिल्लो यौन साझेदार को "सुनको नम्बर" पहिचान छ
NNPTSTO। समीक्षा व्यवसायीक र खरीदारों
रोचक विकल्प र तयारी को विधिहरू: zucchini संग बीफ
लेगगिंगहरू किन लगाउने: केही उपयोगी सल्लाह।
यो श्रृंखला "तीन सुरक्षा: अभिनेता, भूमिकाको, सुटिङ
Bam Marguer एक प्रतिभाशाली स्केटबोर्डर, अभिनेता र स्क्रिप्टलेखक हो। जीवनी, चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन
सबैभन्दा रोचक र रमाइलो - वयस्क जन्म दिन को लागि प्रतियोगिताहरु
Daylilies। रोपण र हेरविचार